Ihe Nhazi 200 na Google Algọridim | Martech Zone
Ọfọn, nke a abụghị ihe dị mfe ma ọ bụrụ na ị chọrọ Backlinko na Nnanyere maka ijikọta ihe omuma a iji gbasaa Google algorithm ogo. Ihe omuma ahu na-aga site na ihe ndi ozo, ihe ndi ozo, ihe ndi ozo, ihe ndi ozo, mmekorita onye oru, ihe ndi ozo na akara ndi mmadu. Ebe ọ bụ na ha anaghị etinye a ibu ibu nye onye ọ bụla ihe,
M na-agaghị nitpick ndepụta… Ekwetaghị m niile mmetụta ogo ma ndị na-ka na-adịghị ike na-emetụta gị search engine arụmọrụ site na ịba ụba click-site ọnụego. Kedu ụzọ - ọ bụ nnukwu ndepụta zuru oke maka ị ga-enyocha ma chee echiche ka ị na-ebuli ọdịnaya gị.
Ndepụta zuru oke. Ọ na-eme ka a mata ọtụtụ ihe mere SEO plugins nwere imirikiti nke dị n'elu ejikọtara n'ime ha. Iji maa atụ, SEO Presser. Daalụ maka nke a "niile n'otu ebe" ogo ihe.
Ngwọta data Webex
Ndepụta na-adọrọ mmasị! Daalụ maka mgbalị magburu onwe ya
Jun 6, 2013 na 7:50 AM
Nnukwu akụ Doug! Ga-ihe na m ibe edokwubara! N'okpuru ngalaba ihe ndị dị na saịtị ahụ, ihe okike abụọ ahụ nwere “ọdịnaya abụọ”. 🙂 Nwere ike ịchọ idozi ya.
Jun 13, 2013 na 7:17 AM
Daalụ maka ozi infographic a.
Otu okwu (ewezuga ihe Jacquelyn dere na mbụ): ị nwere ike ịgbanwe snippet n'okpuru “Oge Na-aga” yana :).
Lọ oriri na ọụtaụ na Mangalore
Sep 6, 2013 na 1: 10 AM
Ọmarịcha ihe onyonyo. Ọ bụrụ na ọ ga-ekwe mee, kpọọ weebụsaịtị gị yana URL ya na iji isiokwu ahụ. Ị kwesịrị
jikwa ya na aha, nkọwa, na mkpado meta nke weebụsaịtị gị.
Fọdụ na-ekwu na ugbu a Google anaghị elekwu anya na mkpado meta maka
Jul 27, 2015 na 6: 26 AM
Jul 27, 2015 na 12:46 PM
Ọkt 10, 2015 na 11:48 AM
Chaị m chọtara edemede a na Google ma enwere m nnukwu ekele maka Marketing Tech Blog maka ụdị nnukwu infograph a dị mfe iji lekọta.